WINDOWS 10 NGWAỌRỤ - WINDOWS - 2019
Windows 10 Ngwaọrụ
N'isiokwu a, ebe ị ga-ebudata ngwa ngwa maka Windows 10 na otu esi etinye ha na usoro ahụ, ndị ọrụ a jụrụ ajụjụ ndị a site na G7, bụ ndị emeliterela ụdị osụgharị nke OS site na G7, ebe ha ejirila ngwaọrụ ngwaọrụ desktọọpụ (dịka elekere, ihu igwe). , CPU egosi na ndị ọzọ). M ga-egosi ụzọ atọ iji mee nke a. Ọzọkwa na njedebe nke akwụkwọ ntuziaka a nwere vidiyo na-egosi ụzọ ndị a niile iji nweta ngwaọrụ desktọọpụ desktọọpụ maka Windows 10.
Site na ndabara, na Windows 10 ọ dịghị ụzọ ọ bụla a ga-esi wụnye ngwaọrụ, arụ ọrụ a ewepụla na usoro ahụ ma echere na kama nke ha ị ga-eji okwute ngwa ngwa ọhụrụ nwere ike gosipụta ozi achọrọ. Otú ọ dị, ịnwere ike ibudata ihe omume nke atọ ọzọ nke ga-alaghachi na ngwaọrụ arụmọrụ dị na desktọpụ - a ga-atụle ihe omume abụọ dị otú a n'okpuru.
Windows Ngwaọrụ Desktọpụ (Akụrụngwa Ngwa)
Usoro nnwere onwe mmeghachị Ngwaọrụ na-alaghachi ngwaọrụ dị na Windows 10 kpọmkwem n'ụdị nke ha nọ na Windows 7 - otu setịpụrụ, na Russian, n'otu interface ahụ dị na mbụ.
Mgbe ị wụnye usoro ihe omume ahụ, ịnwere ike ịpị ihe "Ngwaọrụ" ahụ na nchịkọta nhọrọ nke desktọọpụ (site na ịpị aka nri na òké), wee họrọ nke ndị ịchọrọ ịtọ na desktọọpụ.
Ngwaọrụ dị iche iche dị: ihu igwe, elekere, kalenda na ngwaọrụ ndị ọzọ mbụ si na Microsoft, na akpụkpọ anụ niile (gburugburu) na atụmatụ nhazi.
Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe omume ahụ ga-eweghachi ọrụ nke ijikwa ngwaọrụ na ngalaba mmemme nke ngalaba nchịkwa na ihe omume menu nke desktọọpụ "View".
Download free program Gadget Revived you can on the official page //gadgetsrevived.com/download-sidebar/
8GadgetPack bụ usoro free ọzọ iji wụnye ngwaọrụ na Windows 10 desktọọpụ, ọ bụ ezie na ị na-arụ ọrụ karịa nke gara aga (ma ọ bụghị kpam kpam na Russian). Mgbe ị wụnye ya, ị dịka dị na ikpe gara aga, ị nwere ike ịga na ịhọrọ na ịgbakwunye ngwaọrụ site na ndetu nke desktọọpụ.
Ihe mbụ dị iche iche bụ ngwa ngwa nke ngwa ngwa: na mgbakwunye na nke ọkọlọtọ, enwere ohere maka oge ọ bụla - ndepụta nke usoro nhazi, usoro nlekota oru dị elu, onye mgbagha mkpụrụ, ọtụtụ ngwaọrụ ihu igwe naanị.
Nke abụọ bụ ọnụnọ nke ntọala bara uru nke a pụrụ ịkpọ site na-agba ọsọ 8GadgetPack site na menu "Ngwa niile". N'agbanyeghi eziokwu na ntọala na Bekee, ihe niile doro anya:
Tinye ngwa - gbakwunye na wepu ngwaọrụ arụnyere.
Gbanyụọ Autorun - gbanyụọ ngwaọrụ arụmọrụ mgbe Windows malitere
Mee ka ngwaọrụ dị ukwuu - na - eme ka ngwaọrụ dịkwuo ibu (maka ndị nlekota elu dị elu ebe ha nwere ike iyi obere).
Gbanyụọ Win + G maka ngwa - dịka na Windows 10, ngwọta ngwọta Win + G meghere nchịkọta ihuenyo site na ndabara, usoro a na-egbochi nchikota a ma gbanye ngosipụta nke ngwaọrụ na ya. Ihe nchịkọta ihe a na-eme ka ịghachite ntọala ndabara.
I nwere ike ibudata ngwa Windows 10 na mbipute a site na saịtị //8gadgetpack.net/
Otu esi budata ngwa Windows 10 dị ka akụkụ nke ngwugwu MFI10
Akụrụngwa Akụrụngwa 10 (MFI10) - ngwugwu nke components maka Windows 10 nke dị na nsụgharị nke usoro ahụ, ma funahụ na 10-na, nke gụnyere ngwaọrụ ngwaọrụ desktọọpụ, ma, dị ka onye ọrụ anyị chọrọ, na Russian (n'agbanyeghị Atumatu nhazi asụsụ Bekee).
MFI10 bụ image disk ISO dị oke karịa gigabyte, nke a ga - ebudata maka n'efu site na saịtị ọrụ (melite: MFI efuola site na saịtị ndị a, amaghị m ebe m ga - achọ ugbu a)mfi.webs.com ma ọ bụ mfi-project.weebly.com (enwerekwa nsụgharị maka nsụgharị nke Windows). Ana m achọpụta na SmartScreen nyocha na Edge nchọgharị bugharia faịlụ nke faịlụ a, ma enweghị m ike ịchọta ihe ọ bụla na-enyo enyo na arụ ọrụ ya (kpachara anya ma ọ bụrụ na agbanyeghi m, ekwenyeghị m ịdị ọcha).
Mgbe nbudata ihe oyiyi ahụ, wụnye ya na usoro (na Windows 10, a na-eme nke a site na ịpị ugboro abụọ faịlụ faịlụ) ma malite MFI10 dị na folda mgbọrọgwụ nke diski ahụ. Nke mbụ, a ga-emepụta nkwekọrịta ikike, na mgbe ịpịsịrị bọtịnụ "Ok", a ga-ebido menu ihe nhọrọ nke components maka ntinye. Na ihuenyo mbụ ị ga-ahụ ihe "Ngwaọrụ", nke a ga-achọ iji wụnye ngwaọrụ nke Windows 10 desktọọpụ.
Ntọala ndabara dị na Russian, mgbe ọ gwụchara na nchịkwa nchịkwa, ị ga-ahụ ihe "Ngwaọrụ Desktọpụ" (Enwere m ihe a mgbe mbanyechara "Ngwa" na igbe nchọta nke ogwe aka, nke ahụ bụ, ọ bụghị ozugbo), ọrụ nke, dịka setịpụ ngwaọrụ nwere ike dị iche na ihe ọ dị na mbụ.
Windows 10 Ngwa - Video
Vidiyo dị n'okpuru na-egosi kpọmkwem ebe ị ga-esi nweta ngwaọrụ na otu esi etinye ha na Windows 10 maka nhọrọ atọ a kọwara n'elu.
Usoro atọ nke nyochaa na-enye gị ohere ibudata ma wụnye ngwaọrụ ndị ọzọ na Windows 10 desktọọpụ gị, mana ndị mmepe na-eburu n'uche na obere ọnụ ọgụgụ nke ha maka ihe ụfọdụ adịghị arụ ọrụ. Otú ọ dị, n'ihi ọtụtụ ndị ọrụ, echere m na ọ ga-ezuru ihe dị ugbu a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na ikike iji budata ọtụtụ wijetị desktọọpụ na ụdị dị iche iche (ihe atụ n'elu) na gbanwee usoro ntanetị, gbanye Rainmeter.